လူတစ်ကိုယ်စိတ်နှစ်မျိုးနဲ့ အမျိုးသမီးလေး မိုဟီနီ - MoviesFan Movie News
လူတစ်ကိုယ်စိတ်နှစ်မျိုးနဲ့ အမျိုးသမီးလေး မိုဟီနီ
မိုဟီနီဆိုတာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ဘုရားမတစ်ပါးရဲ့ နာမတော် ။ ဒီ နတ်ဘုရားမက ကလဲ့စားခြေဖို့အတွက် အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ထဲဝင်ပူးခဲ့လေသလား? ဒါမှမဟုတ် ကလဲ့စားခြေလိုစိတ်ပြင်းပြလွန်းတဲ့ Vaishnavi ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဝေဒနာပုံရိပ်သက်သက်ပဲလား? ဒါကိုတော့ တမီးလ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ ချောက်ချားဖွယ်နဲ့ ကလဲ့စားတို့ကိုရောယှက်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကား “Mohini” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာကြည့်ရှူအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ တမီးလ်စကားပြော အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ Mohini ရုပ်ရှင်ကို တမီးလ်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Trisha ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကာ သူမရဲ့ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာအနုပညာသက်တမ်းမှာ ပထမဆုံးနှစ်ကိုယ်ခွဲဇာတ်ကောင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
လန်ဒန်မြို့မှာသွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို ထည့်မတွက်ရင်တောင် စတန့်ခန်းတွေ၊ VFX အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုကြည့်ရတာနဲ့တင် တန်နေပါပြီလို့ ဝေဖန်သူတွေက ချီးကြူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Trisha က စတန့်ခန်းတွေကို သူကိုယ်တိုင်ကြိုးကြိုးစားစားသရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို VFX ပညာရှင်တွေကိုလည်း ကမ္ဘာကျော် ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေက ပညာရှင်အဖွဲ့ကို ထည့်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ အခုနောက်ပိုင်းပရိသတ်တွေကို အမြဲပညာပေးတတ်တဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်း ကြည့်ရှူသူတွေကို ကလေးသူငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်အထက်ပြုမှု အစရှိတာတွေကို ပညာပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လျို့ဝှက်သည်းဖိုနဲ့ လှည့်ကွက်တွေမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတွေကို နှစ်သက်သူတွေအထူးနှစ်ခြိုက်ကြသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တမီးလ်ရုပ်ရှင် Mohini ကို ကြည့်ရှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့ JCGV အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ပြသတော့မျာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို အသိပေးလိုက်ပါရစေနော်။
Previous Post: ကြီးရင် မှီပြီး၊ ငယ်ရင် ချီကြတဲ့ Hollywood က ဆယ်လီစုံတွဲ ၉ တွဲ
Next Post: ထိုင်းမင်းသမီးလေးပါဝင်ထားတဲ့ နာနာဘဝချစ်သူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး